Ixabiso eliphantsi leRotary Drum NPK Compound Fertilizer Granulator Machine Suppliers and Factory | YiZheng
Rotary Igubu Granulator (ekwabizwa ngokuba yimigqomo yebhola, i-rotary pelletizer okanye i-rotary granulators) sisixhobo esidumileyo esinokuqhubekeka ngezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Izixhobo zihlala zisetyenziselwa imveliso enkulu yezichumiso ezibandayo, ezishushu, uxinzelelo oluphezulu kunye noxinzelelo oluphantsi. Umatshini unezibonelelo zebhola ephezulu yokwenza amandla, ukubonakala okuhle, ukumelana nokubola, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nobomi benkonzo ende. Amandla amancinci, akukho nkunkuma inokukhutshwa, ukusebenza ngokuzinzileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, ubeko lwenkqubo efanelekileyo, itekhnoloji ephezulu, iindleko zokuvelisa eziphantsi. Abajikelezisi beGubu beCompound Fertilizer Granulators zisetyenziswa xa inkqubo yempendulo yeekhemikhali ifuneka.
Yintoni umatshini weRotary Drum Compound Fertilizer Granulator?
Isiguquli seGubu seCompound Fertilizer Granulator sesinye sezixhobo eziphambili kwishishini lesichumisi esimbaxa. Eyona ndlela iphambili yokusebenza kukupela ngegranulation emanzi. Ngomthamo othile wamanzi okanye umphunga, isichumiso esisisiseko senziwe ngokupheleleyo kwimichiza kwisilinda emva kokuthanjiswa. Kwinqanaba elithile lolwelo, ukuhamba okujikelezayo komgqomo kusetyenziselwa ukwenza uxinzelelo lwe-extrusion yezinto kwiibhola. yonke I-NPK yecompany yesichumiso sesichumisi umgca wemveliso kubandakanya:
Ubume beRotary Drum Compound Fertilizer Granulator
Umatshini unokwahlulwahlulwa ube ngamalungu amahlanu:
1) Inxalenye yesibiyeli: umzimba uphela womzimba wenxalenye yenkxaso ebiyelweyo, umkhosi mkhulu. Ke ngoko izixhobo zomatshini ezinamavili zisetyenziswa kwipleyiti yentsimbi yekhabhoni, edityaniswe ngumjelo, kwaye ngolawulo lomgangatho olungqongqo kunye neemfuno ezizodwa zeNkqubo, ifikelele kwinjongo yokusetyenziswa komatshini. Ukongeza koku kubaluleke ngakumbi kugqitywe kwiishelufa zokhathalelo, ngenxa yokuqwalaselwa komzimba wayo kuya kubakho ukungqubana okukhulu, ndityala ngokukodwa umgangatho ophezulu wokulwa nokubola, izinto ezinganyangekiyo, eziphucula kakhulu ubomi umatshini, Elinye lisetyenziselwa ukulahla elinye lamacala omane evili ngentambo yokuxhoma, ukulayisha ngokulula kunye nokothula izinto zothutho.
2) Inxalenye yokuhambisa: lonke icandelo lokuqhuba legranulator libalasele kuwo wonke umzimba womsebenzi onalo mgca. Isakhelo sokuhambisa senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu ngentsimbi, kwaye ngokweemfuno ezingqongqo zomgangatho. Fakela kwisakhelo sokuhambisa Kwimoto ephambili kunye nesinciphisi kukhethwe iimveliso zokuxolelwa zikazwelonke ze-ISO, umgangatho onokuthenjwa. Iinqwelo-mafutha ziqhuba i-pulley, i-V-ibhanti, ukuhambisa ukuhambisa ukuya kusonta, ukuze umzimba usebenze, oqhuba isinciphisi kwinxalenye yokuluka yomsebenzi, ukusetyenziswa kwenayiloni kucime isigaba sokudibanisa sokuluma ukuDlulisa ukuqhuba.
I-3) Izixhobo ezinkulu: zilungiswe emzimbeni, kunye namazinyo okuhambisa amazinyo, into eyahlukileyo eqhuba umsebenzi womzimba, ukusetyenziswa kwezinto eziphezulu zokunxiba ezinokuphamba, ukuze umatshini uphile ixesha elide.
4) Mqengqeleki: uzinzo kumacala omabini omzimba ukuxhasa umzimba uphela.
5) Inxalenye yomzimba: yonke i-granulator lelona candelo libalulekileyo lomzimba, elenziwe ngeplanga yekhabhoni yentsimbi ebunjiweyo, eyakhelwe-ngaphakathi kwi-liner ekhethekileyo okanye i-acid enganyangekiyo ye-steel liner, ukufezekisa amanxeba okuzenzekelayo, ngaphandle kwethumba , Rhoxisa isixhobo esitshintshayo, kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo kunye neemfuno ezizodwa zenkqubo ukufezekisa injongo yomatshini osetyenzisiweyo.
Uphawu lweRotary Drum Compound Fertilizer Granulator
1. Ireyithi yegranulate ifikelela kuma-70%, kuphela yimali encinci yokubuyisa, ukubuyisela imveliso yamasuntswana amancinci, inokuphinda yenziwe granulated kwakhona.
2. Beka ukufudumeza umphunga, phucula ubushushu bezinto eziphathekayo, umbandela kwibhola emva kokuba amanzi esezantsi, ukuphucula ukusebenza kokumisa;
3. ngeeplastikhi zenjineli zerabha zokwenza ulwelwesi, izinto ezingekho mgangathweni akukho lula ukuzinamathela, kwaye zidlala indima ekuchaseni umhlwa;
4. Ukuveliswa okukhulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, iindleko eziphantsi zokugcina.
Yazi ngakumbi malunga neNkqubo yokuvelisa isichumisi seDrum yeGum Rotary Drum
Isichumisi esihlanganisiweyo siveliswe yigram granulation. Isichumisi esimbaxa sinokunika izondlo kwizityalo ngendlela ejikelezayo. Indlela yokwenza ikhemikhali kukuvelisa izondlo-mzimba eziphambili (ezinje nge-N, P, K kunye nezinye izinto ezilandelwayo) ezifunwa zizityalo, nge nitrogen, i-phosphorus, i-potassium nezinye izinto zamachiza ezilungele ukulinywa kwezityalo eziziinkozo, ze emva koko kugalelwe izityalo umhlaba. Ukufunxa izondlo emhlabeni. Umgaqo wenkqubo ubandakanya i-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium particles, i-ammonium sulphate particles, i-calcium hydrogen phosphate particles kunye ne-fertilizer edibeneyo izinto ezahlukileyo ezingumgubo zenziwe ngengqolowa, zomile kwaye zipholile ukuvelisa isichumisi esigqibeleleyo. Inkqubo yezobuchwephesha yemveliso yemveliso yesichumiso inokwahlulwa ibe yinto ekrwada, ukuxutywa kwemveliso eluhlaza, i-granulation yempahla ekrwada, ukoma kwamasuntswana, ukupholisa amasuntswana, ukuhlelwa kwamasuntswana, ukutyabeka imveliso egqityiweyo kunye nokupakishwa kwemveliso yokugqibela.
Isiguquli seDrum Compound Fertilizer Granulator Umboniso weVidiyo
Umjikelo weRumary Drum Compound Fertilizer Granulator Model Selection
Egqithileyo Uhlobo olutsha lwe-Organic Chumisa i-Granulator
Okulandelayo: Idiski yeOrganic yeComputer kunye neComputer Granulator
Intshayelelo Yintoni le Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine? Umatshini wokuSityumza oManzi ongenamanzi sisixhobo esityumkileyo sobuchwephesha bezinto ezinomswakama ophezulu kunye nefayibha emininzi. Umatshini oPhezulu wokuTyalela isichumisi uthatha iirotors ezinamanqanaba amabini, oko kuthetha ukuba inyukile kwaye yehla amanqanaba amabini otyumkileyo. Xa izinto ekrwada fe ...